हेप्नेको पनि सिमा हुन्छ नि! भारतीय चर्चित नेतृले नै यसरी किन होच्याइन् नेपाललाइ, पुरै भिडियोमा हेर्नुहाेस् – PathivaraOnline
Home > समाचार > हेप्नेको पनि सिमा हुन्छ नि! भारतीय चर्चित नेतृले नै यसरी किन होच्याइन् नेपाललाइ, पुरै भिडियोमा हेर्नुहाेस्
एजेन्सी – नेपाल र नेपालीलाई अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्ने भारतीय आम आदमी पार्टीकी सांसद अल्का लाम्बाले माफि मागेकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा रहेको सो पोष्ट हटाउँदै माफि मागेकी छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलक्षित सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा उनले नेपालबारे अपमानजनक ट्वीट गरेकी थिइन् ।
सो ट्वीटको सर्वत्र विरोध भएपछि लाम्बाले ट्वीट हटाएको जानकारी गराउँदै माफि मागेकी छन् । उनले माफि माग्दै लेखेकी छन् ‘मैले लेखेको ट्वीटका कारण नेपालीहरुलाई दुख पुगेको थाहा पाए । त्यसैले मेरो छिमेकी देश नेपालवासीहरु माझ खेद प्रकट गर्छु ।
मेरो उद्देश्य कसैलाई दुख पुगोस् भन्ने थिएन । मैले तपाईहरुको भावनाको कदर गर्दै त्यो ट्वीट हटाएकी छु । ’यस अघि उनले नेपालीलाई अपमान हुने गरी लेखेकी थिइन् ।प्रिय भारतवासी,कृपया यसपटक प्रधानमन्त्री चुन्नुहोला ।चौकीदार त नेपालबाट पनि मगाउन सकिन्छ ।नेपालका चौकीदार चोर हुँदैनन् ।
यसरी ट्विटमै माफी मागिन्